Waxaa muhiim ah in sawiro gurmad ka iPad. Taasi waa sababta oo ah, kuwaas oo u qoraan sawiro farxad iyo calool xun noloshaada. Si ay u sii jidhka, gurmad waa doorasho wanaagsan. Photos sida caadiga ah lagu soo qabto badan oo lagu kaydiyo taasoo ku qasbi karta in aad qabto jirin meel ku filan files kale. Si aad u fogaado, aad gurmad iPad photos in PC, oo markaas iyaga tirtiri kartaa ka iPad. Waxaa jira 3 hab oo loo sameyn iPad gurmad sawir. In qayb hoose, waxaana idin tusin doonaa mid mid.
Habka 1. kaabta iPad Photo Library iyo Roll Camera in Computer la TunesGo
Habka 2. Buur iPad sida Cable USB in kaabta Photos iPad qabtay a
Habka 3. kaabta iPad Photos si Mac la iPhoto
Wondershare TunesGo ama Wondershare TunesGo (Mac) waa sahlan in la isticmaalo iPad gurmad sawir software. Waxaa aad u saamaxaaya in ay gurmad oo dhan ama sawiro la doortay oo albums ee iPad Camera Roll, Photo Library si aad u computer. Markaas, waxaad tirtiri kartaa sawiro iPad ku yaalla.
Qaybta hoose ku diiradda saarayaa sida ay u gurmad sawiro ka iPad in computer talaabo talaabo on your computer Windows. Haddii aad isticmaasho Mac ah, maraan tallaabooyinka hoose, qaadaana talaabooyinka la midka ah ee aad Mac.
Tallaabada 1. Ku rakib iyo abuurtaan gurmad sawirada iPad ee software on your computer. Lugood waa in aad ku rakiban. Connect aad iPad la computer via cable USB ah. Marka xiran, aad iPad la isla ogaado doonaa. Markaas, aad iPad la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Dul column bidix oo guji Photos . Markaasaa photos waxaa lagu soo bandhigaa Murayaad saxda ah. Ama, waxaad sidoo kale riixi kartaa Roll Camera, Photo Library ama album wax ka yar Photo category si ay u muujiyaan sawirada. Dooro sawiro aad rabto oo guji dhoofinta in .
Sida loo kaabta iPad Photos
Waa hab si xor ah u photos gurmad ka iPad in PC. Uma baahnid in aad si loo soo dajiyo kasta oo qalab dhinac saddexaad. Iska akhriso qaybta oo isku day inaad naftaada.
• Your iPad iyo cable USB ay
• Your laptop ama computer Windows shakhsi
Raac tallaabooyinka Easy ah:
Tallaabada 1. Isku aad iPad in Windows PC adigoo isticmaalaya cable USB ah.
Tallaabada 2. Suuqa ayaa Play Auto arbushin ilaa doona. Dooro Import Sawiro iyo Videos adigoo isticmaalaya Windows Operating System your computer ee. PC ayaa markaas heli doona oo dhan photos iyo caga kaydinta.
Tallaabada 3. sanduuqa A pop-up yar ka muuqan doontaa, aad si fudud u riixi kartaa Import.
Tallaabada 4. computer ka dibna bilaabi doonaan in ay soo dhoofsadaan oo dhan sawiro ka yimid iPad. Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad masixi oo dhan sawiro ka yimid iPad ka dib.
Tallaabada 5. Marka oo dhan photos videos ama aad ayaa la xoojiyaa, waxaa laga yaabaa in aad iyaga u eegaan oo ay hubinaya Photo Gallery kombiyuutarka.
• aad computer Mac
Tallaabada 1. Hubi in aad iPad xiran yahay si aad Mac by adiga oo isticmaaleya isticmaale cable USB.
Tallaabada 2. Orod codsiga iPhoto ku saabsan Mac. Haddii aad si guul leh loo qaybiyay ayaa aad iPhoto ku akhridid ​​iPad korkiisa deeruhu, markaas codsigaaga lagu daahfuri doonaa si toos ah.
Tallaabada 3. Dhammaan sawirrada aad iPad la soo bandhigi doonaa. Si fudud riix Import soo xulay ama Import Photos.
Sida loo Copy iPhone Photos in iPad
Best 5 Apps si ay u gudbiyaan Photo Transfer
Best 5 Apps Camera u iPad
3 Siyaabaha Bedelka Photos ka iPad si Mac
> Resource > iPad > 3 Siyaabaha kaabta iPad Photos